यम (प्लुटो)बाट सूर्य कस्तो देखिन्छ ? ~ विज्ञान संसार
यम (प्लुटो)बाट सूर्य कस्तो देखिन्छ ?
Posted by Om Bhandari On 11:30 PM
लामो समयदेखि सौर्यमण्डलको नवौँ ग्रह मानिएको तर केही समयअघि मात्रै क्षुद्रग्रहमा परिणत गरिएको यम - प्लुटो बाट सूर्य कत्रो र कस्तो देखिएला ? अनि त्यसको तापक्रम कति होला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि सूर्यबाट यमको दुरी थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । सूर्यबाट यमको औसत दूरी दुई अर्ब ६७ करोड ५० हजार माइल रहेको छ । सामान्य नापमा यो दूरी निक्कै लामो भए पनि विज्ञानको आाखामा यो दूरी छोटो नै हो । त्यसैले यत्ति लामो दूरीबाट हेर्दा सूर्य पृथ्वीबाट अन्य ताराहरू देखिएजस्तो सानो नभई एउटा ठूलो र चम्किलो ता
राको रूपमा नै देखिने कुरा वैज्ञानिकहरू बताउाछन् । उनीहरूका अनुसार यममा दिनको समयमा देखिने सूर्यको आकार , प्रकार र तापक्रम पृथ्वीबाट पूणिर्माको दिनमा देखिने चन्द्रमाको जस्तै हुने गर्छ ।
सौर्यमण्डलमा चक्र भएका ग्रहहरू कतिवटा छन् ?